Iimpawu, ibhayoloji kunye nendlela yobomi yononkala waseMelika | Ngeentlanzi
Namhlanje siza kuthetha Unonkala waseMelika. Ngononkala obomvu ovela emlanjeni kwaye kwasekuqaleni usuka eUnited States, kungoko igama lawo. Ingabonwa kwamanye amazwekazi apho yaziwa ngokubanzi njengezilwanyana ezingenelelayo. Kwilizwe lethu yaziwa ngokuba ngunonkala waseMelika kwaye sinayo nakwindawo esihlala kuzo.
Kweli nqaku siza kunika iinkcukacha ngayo yonke into malunga nebhayoloji, iimpawu kunye neendlela zokuphila koononkala baseMelika.
2 Inkathalo yaseMelika
3 Ukutya kwe-crab yaseMelika
Luhlobo lononkala oluhlala emanzini angabandi kakhulu. Oku kuthetha ukuba ihlala emilanjeni kodwa inamanzi azolileyo, ngokubanzi. Ithathwa njengenye yeentlobo ezinesakhono esikhulu sokuziqhelanisa nezinto eziphilayo ezahlukeneyo. Ikhula ngokukhawuleza emanzini onyaka kwaye imelana namaxesha ashushu nawomileyo onyakeni ukuya kwiinyanga ezi-4. Ngobukhulu sinokubona ngeesentimitha ezili-12 ubude kwaye malunga ne-50 yegramu yobunzima kuphela.
Unonkala lo akahlali nje kumanzi acocekileyo, kodwa sinokuwufumana emanzini athile anenqanaba elithile letyuwa. Ngokungawanyamezeli kakhulu la manzi, awahlali kuwo ixesha elide. Ubomi bobomi buqhubeka ubuncinci iminyaka emi-5 ukuba iimeko zanele ngokwaneleyo. Itya imifuno kunye nezinye izilwanyana.
Olu hlobo lononkala lunokugcinwa njengesilwanyana sasekhaya. Ukuba nayo ekhaya kufuneka wazi ezinye zezikhokelo zokukhathalelwa kwayo ukuze ibe sempilweni ngalo lonke ixesha. Batya iziqhamo ezininzi, imifuno, kunye neentlobo ezahlukeneyo zenyama. Ukuze basele amanzi, kuya kufuneka ubeke isiponji ngamanzi kwaye baya kufunxa amanzi amaninzi kangangoko. Ngamaxesha ngamaxesha, kulula ukubafaka emanzini amatsha kwaye bakwigumbi lobushushu ukuphucula iimeko zabo.
Into entle malunga nononkala waseMelika kukuba iyakwazi ukumelana namanzi ngamaqondo obushushu ahlukeneyo, nokuba aphezulu okanye asezantsi. Ukuba uza kuyifumana ekhaya, kuya kufuneka ube ne-terrarium kwaye unokwenza uhlobo lomqolomba ngamagqabi kunye nezinti, ukuze bangene nanini na xa befuna kwaye bazive bekhuselekile ngokupheleleyo.
Ukwahlula phakathi koononkala abesilisa nabasetyhini, kufuneka ujonge ubungakanani beenzipho. Kwelinye icala, ukwazi ukuba yeyiphi eyindoda, unokubona ukuba enye yezibopho zikhulu kunezinye. Nangona kunjalo, amabhinqa aneenzipho ezimbini ezilinganayo. Ukuba ufuna ukwenza indawo yokuhlala efanelekileyo kubo, uya kudinga itanki yentlanzi okanye iterrarium. Kufanele ukuba ibe yinto enkulu ukuze ube negumbi elininzi lokuhamba.
Ungathenga ikhonteyina yokubeka umqolomba wayo kwikona kwaye ubenenye ikona egutyungelwe ngamanzi anokungena kuyo. Beka izityalo ngokungathi unonkala ukwindawo ahlala kuyo. Unokumthengela ilog kwaye uyibeke kufutshane nendawo ahlala kuyo. Ke unokufaka umngxuma phantsi kwayo ukuze ufumane ukungcola kwaye ingene.
Ecaleni kwesikhongozeli samanzi unokubeka ikepusi yokutya ukuze izinto zisondelelane kwaye hayi yonke into ichithakale. Ininzi isanti endinayo, kungcono ukuze unonkala azive ekwindawo ahlala kuyo. Ukuba ukongeza izityalo kwaye uhombise yonke into kufutshane nendawo yokuhlala yendalo, kungcono. Kwaye kukuba oononkala, nangona beziqhelanisa ngokulula neemeko ezintsha, zihlala zisenza ngcono ukuba ezi ndawo zilungelelaniswe ngokupheleleyo nendalo.
Ukutya kwe-crab yaseMelika
Ezi ntlanzi zinokutya kwizityalo nakwizilwanyana. Ukutya kwizilwanyana ezingenamqolo kunye nezinye iintlanzi. Imifuno ikwatyiwa ngobuninzi. Ungalujonga utyekelo lokutya abantu okanye ukutsala ngaphezulu kwisidumbu. Kwaye siyabona ukuba i-crab yaseMelika itya enye yazo, Logama nje lo mzekelo ufile okanye uyafa. Inokubonakala isitya ezinye izidumbu zezinye iintlobo ukuba ukutya okuncinci kuyafumaneka.
Le nyani yokuba ngumdli wenkunkuma yenza ukuba ibe yeyona ndawo iphambili ekucoceni ngokubanzi zonke izinto eziphilayo nezingqongileyo. Ukwahlula kwezinye oononkala, kufuneka ujonge nje kwi-morphology ethe nkqo. Olu hlobo lubenza babonakale njengezithambisi kwaye, njengazo zonke ezinye oononkala, banako ukutshintsha i-exoskeleton.
Siza kuthetha ngenkqubo yokuzala kanonkala waseMelika. Lo ngomnye wemibuzo ebuzwa ngabantu abaninzi xa bebona le morphology yoononkala. Mininzi imibuzo ebuzwayo malunga nokuba bobabini abesilisa nabasetyhini benza njani isenzo sesondo. Impendulo ithe ngqo. Indoda, ukuze ilandele umntu obhinqileyo, kufuneka ibe nkulu, kuba kufuneka babambe owasetyhini kwaye babeke isisu sakhe phantsi.
Ukuqhuba ukukhulelwa, iinkunzi zikhangela isidoda sabasetyhini. Ngaphakathi kuyo, isidoda siyakwazi ukubambelela iintsuku ezininzi kude kufike ixesha elifanelekileyo lokuba umntu obhinqileyo abe kwiintsuku zakhe ezichumileyo. Imazi ingabeka amaqanda angama-700, kodwa ixhomekeke kubungakanani bayo bobabini inkunzi nemazi. Nje ukuba ibeke amaqanda, banokuba neentsuku ezingama-20 ukuya kwezi-30 de kube lixesha lokuqanduselwa.
Oononkala balungile ekunxibelelaneni nabanye. Lolunye lolona nxibelelwano luhle phakathi kweentlobo. Ukuze bakwazi ukuthetha omnye nomnye, bahambisa i-clamp kakhulu, nto leyo eyenza ukuba ibe sisenzo esonwabisayo. Xa ubona ukuba unonkala waseMelika uhambisa iinzipho zawo, unxibelelana nolunye udidi olufanayo.
Olunye uphawu abanalo ekuziphatheni kwabo kukuba basebenza kakuhle njengeqela ukukhangela ukutya kunye nokuxhasa iintsapho. Bayadada abalungileyo kwaye bayayenza ngapha nangapha.
Ndiyathemba ukuba ngolu lwazi ungafunda ngakumbi malunga nonkala waseMelika kunye neempawu zayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Izilwanyana ezingenamqolo » Unonkala waseMelika